IVIDIYO: Ikati eliqumbileyo, iFat Jew kunye ne-USCTO yokuQhagamshela kunye nokuzibandakanya | Martech Zone
IVIDIYO: Ikati eliqumbileyo, iFat Jew kunye ne-USCTO yoLwazi lokuNxibelelana kunye nokuzibandakanya
Lwesine, Matshi 26, 2015 Lwesine, Matshi 26, 2015 U-Leslie Nuccio
Nzeni Ikati ye Grumpy kwaye i UmYuda otyebileyo bafana nabantu abonyulwa nguMongameli UMegan Smith? Isixelela ntoni le nto malunga nentengiso?
Njengomntu olinganise incoko iyonke kwi-SXSW iminyaka emithathu ebaleka, ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze uvavanyo oluncinci kulo nyaka ngokuthelekisa inzululwazi yedatha (okt ukumamela kwezentlalo) kunye nesampulu yedatha (okt ukuhamba kwisitalato se-6 kunye nabasebenzi bekhamera nokubuza Imibuzo yabantu abasileyo).
Nantsi into eyenzekayo:
Ngoku, nokuba eli lixesha lokuqala lokuba umntu anike ingxelo kuBarack Obama asetyenziswe kufundo lwedatha yentengiso ecaleni kwekati kunye nomfana othumela izinto ezihlekisayo kwi-Instagram ngumbuzo esingazange sawuphendula. Kodwa ke, yiyo i-Intanethi.
Yintoni oyithathayo kwi-SXSW kulo nyaka? Yabelana ngeengcinga zakho kwizimvo ezingezantsi.
U-Leslie Nuccio sisicwangciso-qhinga sentengiso eMeltwater ebesoloko ekuthengisa kwidijithali ukusukela oko kwenzeka kwi-intanethi yokuqala, nakwintengiso yemidiya yoluntu ukusukela ngo-2008. Ubambe izikhundla ezahlukeneyo zentengiso kuyo yonke le minyaka, zonke ezi zinto zibandakanye ukubalisa amabali ebantwini. Xa engakhathali kwintengiso, ungamfumana rhoqo kunye nenja (uzama ukungacingi ngentengiso).
Landela emva koko: Izikhumbuzo ze-imeyile zasimahla nezilula
Zeziphi izinto eziphambili ze-Facebook zoKhuphiswano lweeNkqubo?